Sikukhombisa ukuthi uwaguqula kanjani amafonti ku-Android ngaphandle / ngezimpande | Izindaba zamagajethi
/ Ungawashintsha kanjani amafonti ku-Android ngezimpande noma ngaphandle kwazo
Elinye lamathuba esinalo lapho siphatha uhlelo lokusebenza lwe-Android ukwenziwa ngokwezifiso kwamafonti avela ku-SO. Singanikeza ucingo lwethu olunye ukuthinta nolunye uhlobo lwefonti olukhanga kakhulu kumlingiswa wethu futhi luphume kancane kokujwayelekile ku-Android, yize kunokuhlukahluka okuningi kunzima ukuthi kube khona okuthile okusungulwe kulolu hlelo lokusebenza kulula ukuthi uyenze ngendlela oyifisayo njengoba sifuna.
Ngenkathi uyimpande singafaka isandla esiningi ohlelweniUngashintsha futhi ifonti yohlelo ngaphandle kokuba namalungelo empande, kepha yebo, ngeke sibe namathuba amaningi uma kukhulunywa ngokwezifiso ngokuphelele. Ngokulandelayo sizokukhombisa izindlela ezimbili, enye enamalungelo ezimpande enye ingenazo izimpande.
1 Ungawashintsha kanjani amafonti ku-Android ngaphandle kwezimpande
1.1 Kusuka kudivayisi ye-Samsung
1.2 Kusuka kudivayisi ye-LG
1.3 Kusuka kudivayisi engeyona i-Samsung noma i-LG
2 / Ungawashintsha kanjani amafonti ku-Android ngezimpande
2.1 Bheka primero
Ungawashintsha kanjani amafonti ku-Android ngaphandle kwezimpande
Kusuka kudivayisi ye-Samsung
Masithathe njengesibonelo idivayisi ye-Samsung evame ukuthandwa abasebenzisi be-Android. Inkampani yaseKorea ivumela ukushintsha ifonti kumadivayisi we-Samsung ngaphandle kwesidingo sokuba yimpande.
Kufanele uye kuzilungiselelo> Khombisa> Ifonti> Isitayela sefonti
Ukhetha noma ibaphi kulabo abakhona.
Ungakhetha futhi amafonti amaningi kusuka kumaphakeji ku-Samsung App Store
Kusuka kudivayisi ye-LG
I-LG futhi ikuvumela ukuthi ushintshe ifonti yohlelo futhi indlela yokukwenza iyefana naleyo evela kudivayisi ye-Samsung. Ungaya futhi esitolo sabo se-SmartWorld ukulanda ezinye mahhala noma ezikhokhelwayo.
Kusuka kudivayisi engeyona i-Samsung noma i-LG
Ukuze wenze lokhu kufanele landa uhlelo lokusebenza lomuntu wesithathu njenge-Go Launcher Fonts, ezotholakala kalula kwesinye seziqalisi ezithandwayo njenge-Go Launcher. Khumbula ukuthi uma ulanda ifonti, kuzofanela uskene amafonti ukuze lawo owalandile avele.
/ Ungawashintsha kanjani amafonti ku-Android ngezimpande
Yenza isipele semithombo onayo esigungwini. Ngalokhu ungafaka iMenenja yefayela ye-ASTRO futhi kanye kuhlelo, uzokwenzal isithonjana sefoni encane ngaphezulu kwesobunxele ukuya kufolda yezimpande zedivayisi.
Lapho usukhona, zula uye kusistimu> amafonti> chofoza kusithonjana esibukeka njengohlu lokuhlola phezulu bese ushaya kusithonjana semenyu samachashazi amathathu ezansi kwesokudla bese ukhetha "khetha konke".
Ukopisha imithombo kwenye indawo njengekhompyutha yakho, uma kungenzeka uyidinge futhi.
Ngemuva kokuthi isipele silondolozwe kahle. Isikhathi soku landa noma yiziphi izinhlelo zokusebenza zezimpande lokho kuzokuvumela ukuthi ushintshe amafonti. Sawubona ungomunye wabo.
Uma usuyilandile wayifaka, uyivule. Uzoba khona ngaphambi kwe- uhlu lokubuka kuqala okuhlukile kunqwaba yemithombo lapho unezinye ngeSpanishi. Khetha eyodwa, chofoza kuyo, uyilayishe, wamukele iwindi le-pop-up, bese ukhetha u- "use" ezansi kwesobunxele.
Ngemuva kokuthi iphakethe selifakiwe, uzocelwa ukuthi uqale kabusha ukuze izinguquko zisetshenziswe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » / Ungawashintsha kanjani amafonti ku-Android ngezimpande noma ngaphandle kwazo
Ungasiguqula kanjani isithombe sibe isithombe se-ASCII kalula nge-Ascii Generator 2
Isiphetho: imizwa ephikisanayo